Hantida marka furiin la galo - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Furiinka > Hantida marka furiin la galo
Marka uu guurku dhamaado, waad ka heshiin kartaa sida hantida loo qeybsanayo. Waxaad sidoo kale ka heshiin kartaan qofka labadiina sida ku meelgaarka ah u sii deganaanaya guriga wadajirka aad u leedihiin.
Caawimaadda qeybinta hantida
Haddii aad awoodina inaad ka heshiisaan sida loo qeybinayo hantida, labada lamaanood midkii doona ayaa dalban kara qeybinta hantida, qeybinta (ositus). Qeybinta waxaa la sameyn karaa islamarka codsiga furiinka ee ugu horeeya la dhigo. Looma baahna in la sugu dhamaanshiyaha lixda bilood ee waqtiga ka fiirsashada ah.
Marka aad doonteen qeybinta, maxkamadda ayaa amraysa hanti qeybiye qeybinaya hantida. Hanti qeybiyaha waa shaqadan lacag laga siiyaa.
Bilowga qeybinta waa in lakeenaa cadeynta hantida iyo deynta labada lamaane ay qabaan ama ay leeyihiin. Bogagga hagaha sharciga Finland waxaad ka heleysaa macluumaadka dukumentiyada aad qeybinta hantida darteed u baahantahay.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qeybinta waxaad ka heleysaa bogagga Wasaaradda cadaaladda (Oikeusministeriö).
Hantida si siman miyaa loo qeybinayaa mise?
Inta badan marka furiin lagu jiro hantida waxaa loo qeybiyaa si siman. Xaalado gaar ah marka lgu jiro hantida si siman looma qeybiyo. Markaas qeybinta waa laga wadaxaajoon karaa. Tan waxaa loola jeedaa in xaaladan marka lagu jiro maanka la gelanayo waxa ugu macquulsan. Tusaale ahaan haddii uu guurku jiray wax kayar shan sano ma ahan wax qasab ah in hantida si siman loo qeybiyo.
Wadaxaajoodka qeybinta waxaa la sameyn karaa oo kali ah haddii labada lamaane uu midkood si gaar arrintaas u doonayo.
Haddii aad sameysayn heshiiska shuruudda guurka, heshiiskan wuxuu saameyn ku yeelanayaa sida loo qeybinayo hantida.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 15.09.2020 Boggan war-celin ka soo dir